मुस्ताङमा लगातारको वर्षाले स्थास्थ्य चौकीदेखि मनोरम तालसम्म क्षति पु¥यायो « News24 : Premium News Channel
मुस्ताङमा लगातारको वर्षाले स्थास्थ्य चौकीदेखि मनोरम तालसम्म क्षति पु¥यायो
मुस्ताङ, २९ भदो । लगातारको भीषण बर्षाका कारण मुस्ताङको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । करीब १० घण्टा भन्दा बढी निरन्तररुपमा आएको बर्षाले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अन्तरगतको वडा नं. २, ३, ४ र ५ को बिभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
भदौ महिनाको अन्यतिर आएको भीषण बर्षाले गर्दा यतिबेला मुस्ताङवासीलाई न निद्रा न भोक भएको छ । चाडबाड सुरु भएलगत्तै आएको बर्षाले गर्दा स्थानीय मात्र नभई स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुले समेत सास्ती खेप्नु परेको छ ।
हिमाली भेगमा यति धेरै बर्षा भएको यो पहिलो र डरलाग्दो पनि भएको मुस्ताङवासीको अनुभव छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अन्तरगतको वडा नं. ५ ताकलुङमा हरितालीका तीजकै दिन आएको भीषण बर्षाले गर्दा करिब दुई बर्ष अगाडि निर्माण गरिएको साढे २ करोड बराबरको स्वास्थ्य चौकी र सामुदायीक भवनमा क्षति पुगेको छ । सामुदायिक भवनमा केही मात्रामा क्षति पुगे पनि स्वास्थ्य चौकी भने पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
यसैगरी स्थानीयहरुले लगाएको मकै, आलु, फापर जस्ता नगदेबाली पूर्ण रुपमा नष्ट मात्र नभई आउदा दिनहरुमा बाली लगाउनै नमिल्ने गरी बाढीले पुरेको छ । करीब १५० रोपनीमा लगाइएको नगदेबाली, ५ रोपनी बराबरको जग्गामा निर्माण गरिएको कुन्जो स्वास्थ्य चौकी, करीब ३० रोपनी जमिन पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।
यसैगरी साबिककै टिटी गाउँमा पनि भीषण बर्षाकै कारण गाउँ ठूलो क्षति पु¥याएको छ भने अत्यन्तै मनोरम तथा पर्यटकीय गन्तव्य टिटी ताललाइ पनि आंशिक रुपमा क्षति पु¥याएको छ ।
ताल संरक्षणकै लागि भनेर निर्माण गरिएको पक्की बाँध र चक्रपथलाइ समेत क्षति पु¥याएको छ । यसै गरी थासाङ गाउँपालिकाकै वडा नं. ३ स्थित कोखेठाँटीमा समेत बाढीले पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएको छ । लगातार रुपमा आएको बर्षाकै कारण थासाङवासी त्रासमा दिनरात विताउन विवश छन् ।